Top 10 Oge gboo Artists.
Gịnị na-eme kpochapụwo music otú egwu? Site Einstein ka Shakespeare, ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị uche n'akụkọ ihe mere eme e metụrụ kpochapụwo music. Ọ bụ ụdị music na nwere ikike iji mee ka obi gị na-etinye gị na a miri emi echiche ọnọdụ. Omuma music nwere ike ọ gaghị na-ewu ewu na o nwere otu narị afọ gara aga, ma ya adị bụ mara mma too anyị na egwu kwa. Isiokwu a ka anakọtara n'elu 10 oge gboo artists niile oge na-ezie nwụrụ ogologo oge gara aga, ha n'ike mmụọ nsọ site music ka na chere ka ụbọchị.
Part2. Ludwig Van Fernandes.
Part4. Fredric Chopin.
Wolfgang A. Mozart a mụrụ ya na 27 January 1756 na Salzburg, nke dị ugbu a Austria na Ẹda dị ka otu nke kasị mma oge gboo-arọ niile oge. Otu uche si sayensị amamihe Albert Einstein "Mozart bụ kasị ukwuu dere niile". Ọ meela ya music talent na a obi na afọ na na afọ nke 5 o mastered keyboard na violin, leekwa na-elekọta mmadụ nọ n'ọkwá dị elu ofụri Europe. O dere karịa 600 ọrụ oge gboo music genre. Ụfọdụ n'ime ndị kasị ama Mozart ọrụ na-agụnye:
Piano Sonata na A
Nchịkọta egwu ọ bụla. 40
2. Ludwig Van Fernandes.
Ludwig Van Fernandes bụ a German dere na pianist mụrụ na 1770 na ama Itie dị kasị pụta ìhè na ọnụ ọgụgụ na mgbanwe n'etiti Oge gboo na Ihunanya oge. Mbụ ya music nkụzi bụ nna ya na dị nnọọ ka Mozart ọ mụtara nkà nke Music na a dị obere. Ya kasị mara amara ikwọ agụnye 9 symphonies, 32 piano sonatas, 5 concertos maka piano na 16 eriri quartets. Ụfọdụ n'ime ya kasị ama ikwọ agụnye:
Nchịkọta egwu ọ bụla. 9
Piano sonata ọ dịghị. 14.
Mụrụ na 1685, Johann Sebastian Bach bụ a German organist, andiwet na violist. O si a ezinụlọ nke egwú ndinyanade mbịne azụ ọtụtụ ọgbọ na ya ikwọ na-atụle n'etiti ndị kasị ukwuu ọrụ na olu. O dere, sị n'elu 1000 mebere na ọrụ ya na-agụnye Na sonatas, solo sonatas, na anọ orchestral oke ime ụlọ. Best mara ọrụ site ogbe agụnye:
Nkà nke Fugue
The ike. n'obi clavier
St. Mathew ahuhu.
4. Fredric Chopin.
Fredrick Chopin a mụrụ ya na 1 March, 1810 na dị nnọọ ka Mozart Chopin nwere nkà nwa ma guzosie ike onwe ya dị ka otu n'ime n'elu-arọ na a nwata. Ọ bụ onye pianist na a dere nke Ihunanya oge. Ọ na-renown na mepụtara nke instrumental ballade na ọtụtụ egwú innovations. Ka ụbọchị n'elu 230 ọrụ nke Chopin ndụ na ọrụ ya niile na-agụnye piano na nanị ole na ole n'ofè solo piano music. Ya kasị ama ọrụ na-agụnye:
Barcarolle na F-Sharp isi.
Antonio Vivaldi bụ ihe Italian dere, violin, onye nkụzi na a cleric. Mụrụ na Venice na 1678, ọ a ghọtara dị ka otu nke kasị ukwuu Baroque-arọ na ya mmetụta agbasawo nile Europe. Vivaldi dere ihe karịrị 500 concertos nke nke banyere 350 bụ solo urụk na 230 bụ maka violin. Ya kasị ukwuu na kasị ama mejupụtara bụ usoro nke violin concertos akpọ Le quattro stagioni. Ihe ọzọ ọ mebere site Vivaldi agụnye:
N'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ
6. Peter Tchaikovsky llyitch
Mụrụ na 1840, Piotr llyitch Tchaikovsky bụ a Russian dere onye ọrụ na-agba na kasị ewu ewu na egwuregwu music na ndị oge gboo olu. Ọ e weere dị ka otu n'ime kasị pụta ìhè na-akwanyere ùgwù dere na narị afọ nke 20. N'agbanyeghị na ya na-ewu ewu ịga nke ọma na music ndụ ya e atagide nsogbu kama ọ bụ ka enwe mmasị n'ebe maka novelti nke ọrụ ya. Ọrụ ya gụnyere symphonies, concertos, opera na ụlọ music. Ya kasị ama ọrụ na-agụnye:
The nchịkọta egwu no.6
Mụrụ na 23 February, 1685, George Frideric Handel bụ a British Baroque andiwet-ewere dị ka onye kasị ukwuu nke nna ukwu nke usoro ihe nkiri, oratorios, anthems na ngwa concertos. Esonụ nna ya chọrọ, ọ malitere ịmụ iwu na 1702 na n'ime afọ 15, Handel kpururi atọ azụmahịa opera ụlọ ọrụ maka kpọbata ndị English ama na Italian opera nke nyere ya ụfọdụ renown dị ka 'ndị dị ịrịba ama amamihe nke mbụ iji'. Ya kasị ewu ewu na ikwọ agụnye:
Joseph Haydn a mụrụ ya na 31 March, 1732 na Austria na a na-ewere dị ka otu n'ime n'elu gosiri oge gboo-arọ ruru ya egwú onyinye na oge gboo oge. Ọ bụ oké dere na instrumental na mmepe nke ụlọ music dị ka piano. Ukwu ya onyinye na music ụdị akwụ ya epithets "Nna nke Symphony" na "Nna nke eriri quartet". Ụfọdụ n'ime ya isi ikwọ agụnye:
Nchịkọta egwu dịghị 45
The kara aka
Asaa okwu ikpeazụ nke Kraịst.
Giuseppe Verdi bụ ihe iconic Italian andiwet mara maka ya usoro ihe nkiri nke ịnọgide na-ewu ewu ta. Mụrụ na 1813, Ọ mepụtara music talent na nwata na mgbe ahụ malitere ịmụ egwú ikwọ. Ọ etinyere maka mbanye na Milan Conservatory ma a jụrụ ruru afọ ndụ ya. Ya na oké ọchịchọ na-apụghị ya kwụsị na ekemende, ọ malitere ịmụ n'okpuru a ma ama andiwet Vincenzo Lavigna si Milan. Mgbe e mesịrị na o dere atọ usoro ihe nkiri-La traviata, Falsaff na Aida na nwetara ya ndị a ma ama dị ka nna ukwu nke usoro ihe nkiri. Ihe ọzọ ọ mebere site Verdi agụnye:
Igor Stravinsky na-ebe-ewere dị ka otu n'ime ndị kasị akpa-arọ narị afọ nke 20. Kpọ aha-ya site Star Magazine dị ka otu n'ime 100 top ndị a nke narị afọ. Mụrụ 17 June 1882, ọ bụ onye dere, pianist na a eduzi maara n'ụwa nile maka ya stylistic di iche iche. N'agbanyeghị na ya na ịnụ ọkụ n'obi maka music, ọ mụrụ chọrọ ya na-amụ iwu. Ha debara aha ya na Mahadum nke Saint Petersburg na 1901 ma o mechara ama esịn na-achụso ya music ọrụ. O dere atọ ballets nke mere ka ya matara dị ka "otu n'ime ndị music si n'ezie epochal innovators" Ndị ọzọ dere Igor Stravinsky agụnye:
The rite nke mmiri
The Rakes ọganihu
Ụzọ dị mfe iji Download Soundcloud Playlist
YouTube Song Downloader Free Your Music Library
Top 10 Music Downloader égwu (Free na akwụ ụgwọ, n'ihi na iOS na Android)
Olee otú Iji Download Music Online
> Resource> Music> Top 10 Oge gboo Artists.